1 MPANJAKA 21.1-29	F.1,6 | Fitandremana Ankadifotsy
1 MPANJAKA 21.1-29	F.1,6
NY FANAMPARAM-PAHEFANA SY NY VOKANY !
Fitiavan-tena (1-7). Manana ny ampy i Ahaba raha tany sy fananana nefa mbola nitsiriritra ny an’olona ihany. Rehefa tsy nahazo dia nidongy toy ny zazakely. Niditra an-tsehatra ilay vady mpanohana. Inona no nolazainy? Hanampatra ny fahefana eo am-pelatanany mba hahazoana ny fananan’ny hafa. Mpanolotsaina sy mpanohana ny vady saingy ny ratsy no nanohanany ny vadiny sy natorony azy teto fa tsy mba ny tsara. Mila mandini-tena ny vehivavy ny amin’ny tolotsaina omeny ny vadiny. Tsy misaraka ny fitiavan-tena sy ny fanamparam-pahefana.
Paikady maloto (8-16). Nampiasain’i Jezebela ny fifadian-kanina mba hanatanterahany ny paikadiny. Jezebela no mitondra ny raharaha fa tsy ny mpanjaka. Nampiasainy ihany koa ny anaran’Andriamanitra hiampangana an’i Nabota. Mbola misy olona ratsy toetra toy izany hatramin’izao. Ny fivavahana no entina manatanteraka ny hamaizinan-tsaina. Ny olona no azo fitahina fa tsy ny Tompo. Indrisy tanteraka tokoa ny teti-dratsy. Mihevitra ve ireo tsy matahotra an’Andriamanitra fa tena mpandresy eto amin’ity fiainana ity?
Nivoaka ny didim-pitsarana (17-26). Tsy misy olona nanao ratsy ka miala maina izany saingy tsy mivaly eo no eo fotsiny ny ratsy atao. Andriamanitra tsy mipetra-potsiny manoloana ny zava-dratsy ataon’ny zanak’olombelona fa manana ny fotoana hamaliany ny tsirairay amin’ny asany Izy. Izay nataonao no hivaly amin’ny taranakao, izany no hafatra nomeny an’i Ahaba. Tena mafy ary tena ratsy ilay valin’asa. Ny soa sa ny loza no homaninao ho an’ny taranakao?
Andriamanitra fitiavana (27-29). Sarobidy amin’ny Tompo ny fanetren-tena. Azon’i Ahaba tsara ny loza miandry azy sy ny taranany ka nanetry tena nifona izy. Namindra fo Andriamanitra ka nahemony ho amin’ny taranaka ny sazy saingy tsy maintsy mizaka ny vokatry ny fahotany i Ahaba.